Ihowuliseyili amadoda amadoda fashion plain pullover hoodies siko sleeve elide hoodies yoMvelisi kunye Factory | Lebang
Ihowuliseyili amadoda fashion pullover hoodies amadoda yesiko sleeve elide hoodies
Nge-hood ehlengahlengiswayo, i-ribbed trims kunye ne-classic flap yangaphambili-iyasebenza ngokwaneleyo kulo lonke uhambo oluphantsi kwelanga-okanye imvula. Ukuba abanye abathengi bafuna ukuba sinikeze uyilo olukhethekileyo lwee hoodies, siyavuya ukuzama nokwenza isampulu yomzimba kubathengi bethu ukuba babe nemibono yokwenyani okanye eqhubekayo .Le yinkqubo enomdla kakhulu ngexesha loyilo kunye nemveliso.
Yinkulungwane yama-21: ukubila akusikho ukunxiba nje umthambo. Yenza ujikelezo lwakho lwemihla ngemihla oluncinci kunye nokuqokelela kwethu ii-hoodies zamadoda kunye nezikipa. I-Lebang isebenzela ukhetho lwee sweatshi ezigqithileyo kunye ne-zip-up hoodies ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila nokuprinta. Ejongeka njengeziphumo ezahlukileyo kwiimeko ezahlukeneyo .kusasa, ukubaleka ngejezi ezentofontofo, ezigcina kushushu kwimozulu ebandayo, okanye kwiintsuku ezinomoya.
IiHoodies zibalulekile emsebenzini nokuba ubetha ezitalatweni okanye ukhaba ubuyelela usuku. Ukusuka kwiimveliso ezithengisa kakhulu okanye ezithandwayo .Sinokunikela ngohlobo olwahlukileyo lwelaphu kubaxumi bethu abanokukhetha, ukubunjwa okanye ubunzima belaphu. Imarike yaseMelika neyaseYurophu, ilaphu elibhrashiweyo ngaphakathi liyathandwa, kodwa kwezinye iimarike zaseAsia, i-frech terry esecaleni yelaphu iyathandwa. Kwangelo xesha, i-polar eboyeni, i-poly tricot yoboya yamkelwe kwamanye amazwe nakwiimarike, abanye abathengi banokufuna ukuba sibonelele ngelaphu eliprintiweyo kuyilo lwabo olwahlukileyo, ngaloo ndlela, isilika okanye ukuhombisa kungafuneki.
Izinto:I-80% yomqhaphu / i-20polyester, umqhaphu, okanye njengezicelo zakho
Ubukhulu:XS-XXXL, sinokwenza ubungakanani njengesicelo sakho
Uhlobo lonikezelo:I-15years yenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM
1. Ndingazifumana nini iihood zam?
Emva kokuba kuqinisekisiwe, siya kulungiselela umhla wokuqala wokuvelisa ngokwemveliso kunye nexesha lokuhlawula. Nje ukuba umhla uqinisekiswe, ziintsuku eziyi-15-25 zomsebenzi kwimveliso. Nceda ungaxhalabi, inyathelo ngalinye ndiza kukubonisa imifanekiso.
2.Ungawulawula njani umgangatho wakho?
Inkampani yethu inomntu ojonga umgangatho ngamnye, nathi senza ii-hoodies ukusuka ku-2000, umgangatho ulungile, ke inkampani yethu ihlala ilapha.
3. Ndifuna ukwazi iinkcukacha ezithe kratya: Leliphi elona xabiso ulinike lona?
Enkosi ngemibuzo yakho malunga nomnqwazi, ndiyakwazi uyilo lwakho, ndinokumodela kwaye ndiya kwenza umnikelo ofanelekileyo ngokoyilo kunye neemfuno zakho.
4. Uncedo lwethu?
1) umenzi yobungcali kunye 3rd Ukuchongwa kweqela
2) inkonzo OEM & ODM kunye namava engama-21
3) Sinabasebenzi abangaphezu kwama-200 abanobuchule kumzi-mveliso
4) Iindidi zezitayile ziyafumaneka
5) Sineqela lethu lobugcisa, singenza uphawu lwesiko kunye noyilo
Egqithileyo Ihowuliseyili amadoda fashion pullover ihempe
Okulandelayo: UMyili wamadoda, iiHoodies eziPrintiweyo kunye neeYilo
Umqhaphu weCold Pullover Hoodie
Isiko leHoodiee Men Pullover Streetwear
Plain engenanto Pullover Hoodie
I-Plain Pullover Hoodie
Ukulandela umkhondo wePullover
IiHoodies eziMhlophe zePullover
Ijezi yabasetyhini yePullover